किम र मुनबीचको पहिलो भेट | Hamro Patro
किम र मुनबीचको पहिलो भेट
तपार्इँ अहिले दक्षिण क्षेत्रमा आउनुभएको छ, तपार्इँ मलाई उत्तर क्षेत्रमा कहिले लानुहुन्छ ?
सारा विश्वले पर्खिरहेको क्षण थियो त्यो ।
उत्तर कोरियाली प्रमुख किम जङ उन दुई कोरिया छुट्याउने रेखासम्म बिस्तारै आइपुग्छन् जहाँ दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे इन उनको प्रतिक्षा गरिरहेका थिए । उनीहरुले हात मिलाउँछन् र केही भलाकुसारी गर्छन् । त्यसपछि किम सैन्य सिमांकन रेखा नाघ्दै पहिलो पटक दक्षिण कोरिया क्षेत्रमा प्रवेश गर्दछन् । क्यामेराका लागि केही बेर सँगै उभिएपछि, किमले मुनको हात समात्दै उसैगरी मुनलाई पनि उत्तर कोरियाली क्षेत्रमा प्रवेश गराउँछन् । दक्षिण कोरियाले सार्वजनिक गरेको कागजातअनुसार यी दुईबीच भएको कुराकानी यसप्रकार छन् ।
किमः तपाईँलाई भेटेर खुशी लाग्यो । म एकदम खुशी छु ।
मुनः यहाँसम्म आउन केही गाह्रो भयो ?
किमः नाइँ । केही भएन ।
मुनः तपार्इँलाई भेटेर खुशी लाग्यो ।
किमः हजूर, यस ऐतिहासिक स्थानमा भेट्न पाउँदा म अत्यन्तै उत्साहित छु । तपाईँले यस स्थानमा लिन आउनुहुँदा म झनै प्रभावित भएको छु ।
मुनः तपार्इँको साहसिक निर्णयले हामी यहाँसम्म आउन सफल भएका छौँ ।
किमः होइन, होइन ।
मुनः हामीले इतिहास रचेका छौँ ।
किमः तपार्इँलाई भेटेर खुशी लाग्यो ।
मुनः यतापट्टि उभिनुहोस् त !
मुनः तपार्इँ अहिले दक्षिण क्षेत्रमा आउनुभएको छ, तपार्इँ मलाई उत्तर क्षेत्रमा कहिले लानुहुन्छ ?
किमः सायद उत्तर कोरिया क्षेत्रमा पुग्ने सही समय अहिल्यै हो ।
शुक्रबार दुई कोरियाबिचको नाटकीय मिलनपछि उत्तर कोरियाले आणविक हतियार त्याग्ने र विश्व शान्तिलाई बढावा दिने आश बढेर गएको हो । उत्तर कोरियाली प्रमुखले अब केही हप्तामै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग पनि भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । दक्षिण कोरियासँगको ७० वर्षदेखि चिसिएको सम्बन्ध सुधारका लागि किम उनको यो प्रयासले सकारात्मकता बढाएको छ । यसअघि उनका अग्रजहरुले यो हदसम्मको कदम नलिएकाले पनि यस पटकको उत्तर कोरियाको प्रयत्नलाई ध्यानपूर्वक हेरिएको हो ।
आणविक हतियारका कार्यक्रम बन्द गर्ने तयारीसहित शान्ति वार्तामा उत्रिएका किम जङ उनले आर्थिक लाभ, सुरक्षाको प्रत्यानुभूति र दक्षिण कोरियाबाट अमेरिकाका आणविक कार्यक्रम फिर्ता लान सर्त यसअघि उत्तर कोरियाले अघि सारेको थियो । उत्तर कोरियाका यी माग र सर्तहरुमा वार्ता गरी सम्झौतामा आउन मुख्य चुनौती रहेको छ । यता, किम उन भने उत्तर कोरियामाथिको आर्थिक प्रतिबन्ध हटाइ नागरिकको जीवनस्तर उकास्नेतर्पm ध्यान खिच्दै छन् । आणविक हतियारलाई दाउको रुपमा प्रयोग गर्दै उत्तर कोरियामा किम जङ उनले आफ्नो शासन सुरक्षित गर्दै आएका छन् र भविष्यमा पनि गर्ने देखिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त भएको केही समय बित्न नपाउँदै जोन बोल्टनले अमेरिका र उत्तर कोरियाबिचको वार्ता सफल नहुने भविष्यवाणी गरिदिएका थिए ।
उत्तर कोरिया र अमेरिकाबिचको वार्ता सफल रहोस् र विश्व शान्तिले प्रश्रेय पाओस् भन्ने कामना मात्र हामी गर्न सक्छौँ । उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच बढ्दै गएको खिचातानीलाई मध्यनजर गर्दै दक्षिण कोरियाले बडो रणनीतिक चाल चल्दै दुई देशबीचको शान्ति वार्तालाई अघि बढाउन सफल भएको थियो । विश्व शान्ति कायम रहोस् ।